Raha mirary soa ho an’ny firenena amin’izao Asaramanitra izao dia mirary soa ny vahoaka Malagasy na ny kely na ny lehibe. Isika tokoa no maha firenena ny firenena koa mirary fahombiazana ho an’ny rehetra amin’izay sehatra misy azy avy, hoy ny hafatra nataony. Enga anie isika tsy hisy hiraviravy tanana na hialangalana amin’ny adidy sy andraikitra misy antsika amin’ny isan-tokantrano, ny isam-piarahamonina, ny eny anivon’ny asa ataontsika andavanandro. Tsy hanaradrian-drano fahatany ny zava-misy ihany koa fa hisaina tsara hatrany, ho sahy sy vonona hijoro amin’ny maha malagasy, hiady ho an’ny Malagasy fa izany no hampijoro sy hampandroso ny firenena. Hiara-paly isika anio, hoy izy omaly, nefa tsy hanao fety fotsiny fa mba iainana isan’andro ary tandrovina sy arovana tsara izany hoe fahaleovantena izany, amin’ny lafiny rehetra, ho antsika mianakavy izao, indrindra ho an’ny taranaka faramandimby, hoy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana.